Izinhlelo zokukhokha zamakhishi
Izindlela zokukhokha ekhishini - ibha yensimbi, ehlelwe odongeni, ekhonza ukubeka izimfanelo zasekhishini. Kuzo, ungafaka ngokunembile ama-ladle, i-colander, amafosholo, ama-graters nezinye izinto. Ukufakwa okuhambisanayo (izingwegwe, abanikazi, amashalofu) ukwandisa ukusebenza kwesistimu yokumisa futhi kwandiswe uhlu lwezesekeli ezingafakwa kuzo.
Ngokwehlukana, ukuphatha izikhwama zekhishi. Zifakwe efenitheni - ezikweletini noma ezakhiwe ngaphakathi. Ukuphatha kunesimo esinengxenye yesiphambano sesikwele, nxazonke noma emgqeni. Izesekeli ezinjalo zilula ukuzisebenzisa njengama-rack wewel.
Ikhishi lihlambalaza - umhlobiso nenduduzo
Izindlela zokubuyisa zivame ukusetshenziswa njengomhlobiso wokugcizelela isitayela ekamelweni. Ukukhwabanisa noma ukukhwabanisa okwakhiwa kwekhishi okwenziwe ngethusi, igolide idala ngaphakathi kwezinto zokunethezeka zasendulo.
Ukuthuka okumnyama - izesekeli ezenziwe ngesitayela ekhishini kwisitayela se- loft yezimboni, issimbi - ye- hi-tech ne-design yanamuhla.
Izinto ezivame kakhulu ukugwaza kwekhishi yinsimbi engagqwali. Ayesabi uketshezi namakhemikhali asekhaya, isikhathi eside silondoloza ukubukeka kwayo kokuqala nokuqala.
Uma ukhetha umbala nokuma, kufanele futhi uqondiswe umthunzi wezinto ezisendlini.
Izitimela zekhishi ziyi-angular noma ziqondile, zinamathele ngaphansi kwamakhabhinethi alenga, ngaphezulu kwekhonksi yokusebenza. Kungaba umugqa omude ogijima kuzo zonke izindonga nge-suite. Ngezinye izikhathi ipayipi eliqondile elinamashalofu kanye nokuma lifakwe ekhoneni ekamelweni noma ku-counter counter. Uhlelo oluqondile lungabuye lubekwe phakathi kwetafula letafula kanye nokuphahleni noma ukushayela kanye nesitezi.
Ukusetshenziswa kokuthuka ngaphakathi kwekhishi kwenza kube ngcono futhi kusebenze. Siyabonga, noma iyiphi into edingekayo ihlala iseduze, futhi ekamelweni lilawula ubuqili nokuhleleka.
Isihlalo sobukhosi egumbini lokuphumula ngesitayela samanje - indlela yokukhetha indlela engcono yokuphumula?
Amasango e-sliding azenzekelayo
Ungabeka kanjani laminate?
Izitini ezihlobisa ukuhlobisa kwangaphakathi
Amaphepathi akhiwe ngoboya
Izinzuzo zokuthungwa okulula
Ungalenga kanjani amakhethini emgodini ophahleni?
Isikhala ngaphansi kwezitebhisi
Indlela yokwenza indlu ehlelekile?
Isihlalo sokuphoqa esinembuyiselo
Izibani zonyaka omusha
Indlela yokwenza ama-ravioli?
Yeka indlela okumnandi ngayo ukubhaka inkukhu kuhhavini?
I-allergic ihlaselwa enganeni
Oligomenorrhea - kuyini?
Ungakhetha kanjani i-hob?
Ibha ye-Bar yekhishi
I-Counter Three Rate
Ama-anyanisi ase-Indian - isicelo
Ukupheka kanjani ama-chestnuts?
Ukuskena kweDuplex kwezitsha zekhanda nentamo
Ukuthuthukisa imidlalo yezingane ezineminyaka engu-2-3 ubudala
Amalungu ezandla noma ukulimaza izandla kanye nemilenze noma izimpande - yini okufanele ukwenze noma yenza?
I-Cherry inhle futhi imbi
I-Pilates - Yoga
Kumele ube - entwasahlobo-ehlobo 2014
Amaqanda athunjiwe: iresiphi
I-master-class: inhlama enosawoti
Isobho se-Vegetarian lentil
I-Vertigo - ukwelashwa
Izimpawu zikaKhisimusi ngempilo, ngothando nangomshado